Ololaha Doorashadu ha ka Turjumo Sidaynu ugu Dacfarnay Dimuqraadiyadda
Monday 24th May 2021 07:15:40 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Shalay oo isniin ah waxa dalka Jamhuuriyadda Somaliland ka bilaabmay lix maalmood oo ah Ololaha Doorashooyinka
isku-sidkan ee Wakiillada iyo Deegaanka, kuwaasi murrashaxiinta iyo xisbiyadu ay codbixiyeyaasha kaga dalbanayaan codkooda, una soo bandhigayaan barnaamijkooda siyaasiga ah.
Ololuhu lixdaas maalmood waxa uu socon doonaa maalin walba 12 saacadood oo xidhiidh ah, waxa lagama maarmaan ah in xisbiyadu ay murrashaxiintooda ku ilaaliyaan inay dhawraan anshaxa ololaha oo laga baaqsado wixii xanaf ah iyo deelqaafyada ummadda kala fogeynaya.
Xisbi walba waxa xil ka saaran yahay in labadiisa maalmood ee Ololaha uu si wax ku ool ah u maamusho isla markaana uu si miyir qabta ummadda uga codsado inay doortaan. waxana habboon in laga ilbaxo shakhi cayga iyo hadallada dhiifta leh.
Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay uga digtay Hawlwadeennada iyo xubnaha Ciidammada inay ku lug yeeshaan siyaasadda iyo doorashooyinka, waxana sida sharcigu yahay Xukuumaddu ay balan qaaday inay tallaabo ka qaadayso adeegeyaasha dawladda ee lagu qabto astaan iyo ololeyaal xisbi ee xeerarka dalku ka reebeen.
Waxa kaloo xisbiyada u yaalla inay dhexdooda isku dardaaraan sidii looga feejignaan lahaa wax kasta oo amniga iyo xasiloonida dalka wax yeeli kara.
Furfurnaanta iyo xadaarada ololaha doorashadu waa inuu noqdaa mid cibro iyo tusaale u noqda dalalka Geeska Afrika oo dhaqankoodu yahay in Xukuumadda talada haysaa ay xisbiyada mucaaridka ah ku muquuniso awood dawladeed, taasi oo dalkeenna ka jirin xataa markii nidaamka asxaabta badani uu curdinka ahaa.
Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi waxay Hay’addaha Warbaahinta Qaranka ay horeba u sii fartay inay si dhex ah oo loo siman yahay u baahiso wararka axsaabta kala duwan ee dalka, taasi oo ah mid ka mid ah qoddobada foolaadka ah ee ka turjumaya inay Somaliland haysato horyaalka dimuqraadiyadda Mandaqada bariga Afrika.
Waxa waajib ah inaynu yaqiinsanno in ciddii badisaaba ay Somaliland tahay, sidaas darteedna aynu awooda saarno sidii aynu caalamka ugu soo bandhigi lahayn sida ay JSL ugu dacfartay doorashooyinka iyo dimuqraadiyaddaba.
Waxaan ku soo gabogabayaa niyadsamida uu ku bilaabmay ololuhu inuu ugu dhammaado saxal la’aan, iyadoo Komishanka Doorashooyinkuna ay ku hawlan yihiin inay u garsooraan murrasaxiintii ugu badnaa ee labadagole oo tiradoodu dhan tahay 993 tartame. waxana doorashooyinka Somaliland ay lafjab iyo tumaati ku yihiin Soomaaliya oo caalamku
galiyey Malaayiin Doolar oo haddana laga quustay inay ku heshiiyaan inay qabsadaan doorashooyinkii dadbanaa ee ay isku dooran jireen.
Nidaamka Dawladnimo Iyo Dimuqraadiyadda Dalkeena Ka Jira Soomaaliya Kama Jiraan…"
[Top News:-] Dhacdooyinkii Ku Lamaanaa Isku-soo-baxyadii Ololaha Doorashada Ee Xisbiyadu Dalka Ka Sameeyeen 3-dii Maalmo
Khatarta Xanuunka Covid_19 Iyo Isku-soo-baxyada Ololaha Doorashada Oo Wareeggii Labaad Galay
[Daawo:-] Xisbiyada Qaranka Somaliland Oo Lagu Eedeeyay Khaladaad Iyo Xad-gudubyo Ay Sameeyeen Inta Lagu Jiro Ololaha Do
[Akhriso:-] Muxuu Kaga Duwan yahay Ololahan Doorashooyinka Isku Sidkan Ee Wakiillada Iyo Degaanku Ololayaashii Doorashoo
[Daawo:-] Madaxweynaha Somaliland Oo Si Diiran Loogu Qaabilay Magaalada Berbera & Ololaha Xisbiga KULMIYE Oo Uu Ka Q
[DEG DEG:-] Madaxweynaha Somaliland Oo Khudbad Xasaasi ah Ka Jeediyay Maalinta Koowaad Ee Ololaha KULMIYE Ee Hargeysa
[War Hadda Soo Dhacay:-] Wasiirka Arrimaha Gudaha Oo Ka Hadlay Ololaha Doorashada Ee Dalka Bilaamay Iyo Adkaynta Nabad G